Saturday July 06, 2019 - 09:39:56 in Wararka by Super Admin
Fagaare kuyaal degmada Kurtun Waareey ee Shabeelaha Hoose ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay illaa sedax askari oo katirsanaa ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo Al Shabaab ay ku qabatay howlgallo ka dhacay deegaanno katirsan gobolka.
Qaadiga Maxkamadda islaamiga ah ayaa goob fagaare ah ka akhriyay xukunka eedaysanayaasha kala ah amiin Tifoow oo 23 sana jir ah wuxuu ahaa askari katirsan ciidanka dowladda , Muxiidiin Max'med Cabdi Raxiin oo 36 sana jir ah, Cabdi Wahaab Axmed Xasan oo 30 sana jir ah .
Eedaysanayaasha ayaa gacanta lagusoo dhigay iyagoo askar u ah dowladda Federaalka islamarkaana hubeysan, fagaaraha lagu toogtay askartan waxaa ka hadlay saraakiil katirsan Al Shabaab oo hanjabaad ujeediyay shaqaalaha iyo ciidamada dowladda ee shisheeyaha la shaqeeya.
Dhinaca kale xukun islaami ah oo ka dhacay magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa lagu fuliyay Nin Saaxir ah oo dadka ku dhibi jiray Sixirka iyo waxa Madiidada loo yaqaan.
Cali Xasaneey Axmed Kaaytooy oo 35 sana jir ah ayaa fagaaraha weyn ee Bu'aale lagu dilay, qaadiga maxkamadda islaamiga ah aya sheegay in ninka uu dadka ku diri jiray Jiniga isla isaga ayaana ka saari jiray Jiniga wuxuuna ka qaadan jiray lacago farabadan.
Ninkan Saaxirka ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in Sixirka uu muddo sanada ah ku shaqeysanayay ka hor intii maamullada islaamiga ah ka hana qaadin Jubbooyinka balse uu markale dib ubilaabay.
waxaa kale oo uu sameyn jiray in uu dadka is jeclaysiiyo ama uu isnecbeysiiyo, markii shareecada Islaamka loo bandhigay Sixiroole Cali Xasaneey waxaa lagu xukumay in ladilo.
Maalmihii Arbacada iyo Khamiista ayaa degmooyinka Xagar iyo Salagle oo ka kala tirsan laba Jubbo waxaa lagu dilay 10 Nin oo ku eedaysnaa in ay dowlado shisheeye ubasaasayeen iyadoona shalay Bu'aale lagu dilay Ninkan Sixiroolaha ah isku geynna xukunnada Islaamiga ah ee sedax maalmood ka gudahood ka dhacay Jubbooyinka waxay gaarayaan 11 xukun.